Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Magaalada Dhuusamareeb | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Magaalada Dhuusamareeb
Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Magaalada Dhuusamareeb
Waxaa saaka degan xaaladda Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud, ka dib markii xaalad kacsanaan ah laga dareemay magaalada, labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Xaaladda ku soo korortay Magaalada Dhuusamareeb ayaa timid, ka dib markii Ciidamada Dowladda ay Khamiistii is hortaag ku sameeyeen dad ka baxay Magaalada Guriceel, kuna wajahnaa Magaalada Dhuusamareeb. Ciidamada Dowladda ayaa dadkaasi u sheegay inaanay ku safri karin gaadiidkii ay wateen, iyagoona ku amray inay ka deggaan.
Dadkan oo odayaal ay ku jiraan ayaa habeenimadii Khamiista lug ku gaaray duleedka Magaalada Dhuusamareeb, xilli ay kaga hortaggeen ayna ku soo dhaweeyeen Masuuliyiinta Ahlu Sunada Galmudug, oo u soo gelbiyay magaalada.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda ayaa habeen hore bilaabay inay ciidan xoogan ku soo daadiyaan wadooyinka magaalada iyo kuwa kale ee xaafadaha dhex mara, iyagoona ujeedkoodu ku sheegay inay ka hortaggayan isu soo baxyo ka dhaca magaalada.
Ciidamada Dowladda ayaa Jimcihii hakad-geliyay isu socodkii gaadiidka ee maagalada, sidoo kalena waxaa uu gaabis ku yimid isu socodkii dadweynaha ku dhaqan Xarunta Maamulka Galmudug.
Sidoo kale tani ayaa horseeday in ay xirmaan goobaha ganacsiga ee magaalada, taa oo xoojisay caradii dadweynaha ee markii horeba ka dhalatay dadkii laga hor istaagay inay u soo safraan magaaladaasi.
Wararka saaka laga helayo Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya inay Ciidamada Dowladda wa-xoogaa dabciyeen culeyskii ay soo saareen magaalada, waxaana ciidanka lagu arkayaa barro kontoroolo oo magaalada gudaheeda ay ka samaysteen.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, Madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlu Sunna ayaa Dowladda Federaalka ugu baaqay inaanan la caburin bulshada reer Galmudug, isla-markaana aan loo diidin inay dareenkoodu muujiyan.
Tan iyo markii Ciidamada Dowladda ay la wareegeen amniga Magaalada Dhuusamareeb, bishii November ee sanadkii 2019 ayaa waxay magaaladaasi ku soo kordhiyeen habdhaqan ku cusub dadka deegaanka.
Dadweynaha reer Dhuusamareeb ayaa barraha bulshada saaxiibadooda kula wadaagaya in cidda caqabadda ku ah amniga magaalada ayba yihiin Ciidamada Dowladda.